Ifulethi elisezingeni eliphezulu elinekamelo elilodwa - 59sqm - I-Airbnb
Ifulethi elisezingeni eliphezulu elinekamelo elilodwa - 59sqm
Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Nicole
E-Tenholt ethule, abavakashi, abalingani kanye nabahambi bebhizinisi bahlala efulethini elikhanyayo, elinekhwalithi ephezulu elinegumbi elingu-1 elinomnyango ohlukile, ofinyelelwa ngezitebhisi zangaphandle.
Sinezixhumanisi zokuhamba ezikahle ukuze ukwazi ukufinyelela kumgwaqo wezimoto i-A46 ngemizuzu embalwa nje, ezokuyisa emadolobheni amakhulu alandelayo iHeinsberg, Mönchengladbach, Neuss, Aachen, Düsseldorf, Roermond (Netherlands) & Hückelhoven-Baal.
Kungamakhilomitha amathathu ukuya enkabeni yedolobha lase-Erkelenz kanye nesiteshi esikhulu sesitimela.
Iminyango emikhulu ye-balcony ikuyisa empumalanga nasentshonalanga kuvulandi obheke entshonalanga ezinhlangothini ezimbili zefulethi. Ifulethi elingabhemi elingamamitha-skwele angu-59 linefenisha ephelele futhi linombhede ophakeme, usofa, indawo yokudlela enetafula nezihlalo kanye nekhishi elihlome ngokuphelele elihlanganisa ihhavini, i-ceramic hob, umshini wokuwasha izitsha, usinki, isiqandisi, i-toaster, umshini wekhofi (Nespresso ) futhi iketela. Ungakwazi ukugoqa izingubo zakho nezinye izinto endaweni ekhiyekayo nengena endlini. Indlu yokugezela ineshawa ehlukile kanye nobhavu ozimele ozimele. Umshini wokuwasha nawo utholakala endlini yokugezela. Ngaphezu kwalokho, leli fulethi linoxhumano lwe-inthanethi olushesha kakhulu nge-WiFi kanye namathelevishini amabili esikrini esiyisicaba (eyodwa embhedeni osezingeni eliphezulu neyodwa isendaweni yegumbi lokuphumula, engabonisiwe ezithombeni).
Ifulethi linebhokisi lalo leposi kanye ne-intercom.
Kukhona inkundla yokudlala eduze, kodwa ngeke uphawule lutho efulethini.
I-Tenholt iyidolobhana elithule, elicezile elinabantu abangu-250. Ihlathi eliseduze nezindlela zensimu zilungele ukuhamba ngezinyawo noma ukugibela amabhayisikili.
Idolobhana lase-Erkelenz linepaki kanye nesikhungo sedolobha esinomlando esikumema ukuthi uhambe futhi uhlale esigcawini semakethe.
Kukhona nechibi elisanda kulungiswa langaphakathi nangaphandle e-Erkelenz, elilungele abancane nabadala.
Izindawo zokuvakasha ezikhethekile ongafinyelela kuzo ngemoto:
- Isikhungo sezitolo eRoermond
- I-"Minto" yezitolo e-Mönchengladbach
- Ihholo lokushushuluza e-Neuss
- Ipaki yokuzijabulisa "Phantasialand" eBrühl, ama-roller coasters ayo aphethe amarekhodi omhlaba angu-6
Mein Mann und ich wohnen mit unserer Tochter im ruhigen und sehr netten Tenholt, Erkelenz. Unsere Einliegerwohnung im Dachgeschoss des Hauses, die wir momentan nicht benötigen, möchten wir nun gerne netten Gästen zur Verfügung stellen.
Auf Reisen in der ganzen Welt haben wir viel über andere Kulturen und Bräuchtümer gelernt. Daher freuen wir uns immer, neue Menschen zu treffen und heißen Gäste jeglicher Herkunft willkommen!
Mein Mann und ich wohnen mit unserer Tochter im ruhigen und sehr netten Tenholt, Erkelenz. Unsere Einliegerwohnung im Dachgeschoss des Hauses, die wir momentan nicht benötigen, möc…
Ingabe unanoma yimiphi imibuzo noma ungathanda amathiphu ngendawo noma ezindaweni zokuvakasha? Siyajabula ukuphendula yonke imibuzo ongase ube nayo. Siphinde sihlale sivulekele iziphakamiso zokuthuthukisa.
Ungathanda ukuboleka izisetshenziswa ezengeziwe (isb. ezekhishi noma ezengane/ojahidada)? Vele ukhulume nathi.
Njengoba ngokwengxenye singasese noma ngokomsebenzi, asihlali sikusayithi ngokomuntu siqu. Ungasithola nganoma yisiphi isikhathi nge-SMS noma ngezithunywa ezihlukahlukene usebenzisa inombolo yethu yomakhalekhukhwini. Sihlala ngaphansi kwefulethi ngakho-ke singafinyelelwa mathupha.
Ingabe unanoma yimiphi imibuzo noma ungathanda amathiphu ngendawo noma ezindaweni zokuvakasha? Siyajabula ukuphendula yonke imibuzo ongase ube nayo. Siphinde sihlale sivulekele izi…
Hlola ezinye izinketho ezise- Erkelenz namaphethelo